2.धेरै वजन उठाउने
3.आवश्यकताभन्दा बढी व्यायाम
5.हाई हिलको प्रयोग
खानपानमा विशेष ध्यान दिनुका अलावा दैनिक व्यायाम पनि जरूरी हुन्छ । दिनदिनै १० मिनेट भद्र आसन अवश्य गर्नुहोस्
घुँडा दुखेको समयमा यसलाई कसैले पनि हेल चेक्रराई गर्नु हुदैन । हामीले घरमै बसेर केही सामान्य अभ्यास गरेमा पनि यसलाई
कसरी गर्ने त घरमै अभ्यास ?
५) खुट्टा सिधा तन्काएर बस्ने, दुवै हातले खुट्टाको औंला छुने कोसिस गर्ने – एक देखि १० सम्म १० पटक गर्ने |
Don't Miss it वास्तुशास्त्र आनुसार कुन दिशामा के राख्ने ?
Up Next यस्ता छन्, केही घरेलु उपायबाट धुम्रपानको लत छुटाउन तरिका